Ihe ederede Rakshit Hirapara na Martech Zone |
Edemede site na Rakshit Hirapara
Rakshit bụ ahịa ọdịnaya na Onyeka Onwenu, ụlọ ọrụ mmemme iguzosi ike n'ihe na India. Ọ na-ejide nkà dị egwu na mmemme iguzosi ike n'ihe, ahịa, yana ijide ndị ahịa.
Coronavirus agbagotela azụmaahịa ma na-amanye azụmaahịa ọ bụla ka ọ na-eleba anya na okwu iguzosi ike n'ihe. Iguzosi Ike n'Ihe Nye Ndị Ọrụ Na-atụle iguzosi ike n'ihe site n'aka onye ọrụ. Azụmahịa na-ahapụ ndị ọrụ aka ekpe na aka nri. Ọnụọgụ enweghị ọrụ nwere ike karịa 32% n'ihi Coronavirus Factor ma na-arụ ọrụ site na ụlọ anaghị anabata ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. Aychụ ndị ọrụ bụ ihe ngwọta dị mma maka nsogbu akụ na ụba… mana ọ naghị ahụta iguzosi ike n'ihe. COVID-19 ga-emetụta